Sidee sirdoonka macmalku u bedelayaa ciyaarta ganacsiga maanta? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Sirdoonka Artificial, Sirdoonka Ganacsiga
Sidee sirdoonka macmalku u bedelayaa ciyaarta ganacsiga maanta?
Erayga sirdoonka macmal waxaa la sameeyay 1950-kii, laakiin qaar ka mid ah fikradahooda aasaasiga ah ayaa jiray tobanaan sano. Sirdoonka Artificial waa goob adeegsata kombayutarada si ay u dhamaystirto hawlaha caadiga ah ee la xidhiidha awoodaha garashada aadanaha sida aragga iyo Aqoonsiga hadalka - waxaa loo isticmaalaa automation, injineernimada hawada, warshadaha gaadiidka, iwm. Horumarka dhow ee Google Deep Mind on AlphaGo ayaa sameeyay isbedel weyn xagga cilmi-baarista ku saabsan AI iyo sidoo kale samaynta taariikhda lafteeda by garaacday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu sareeya Go adduunka Lee Sedol 4- 1.
Waxaa laga yaabaa inay u muuqato mid aad u wanaagsan inay run noqoto laakiin markay timaado go'aammada ganacsiga farsamadan ayaa bixisa natiijooyin cajiib ah. Ganacsatadu hadda waxay falanqayn karaan xog aad u tiro badan oo ku qaadan lahayd sannado badan inay ka baaraandegaan mar hore oo ay gaaraan go'aanno xog -ogaal ah oo ku saleysan falanqaynta saadaasha ee ay soo saareen algorithms -ka AI. Maqaalkani wuxuu ku tusayaa sida AI u saamaynayso dhinacan ganacsiyada
Sida laga soo xigtay Gartner, 68% go'aan-qaadayaasha ganacsigu waxay sheegaan inay yeelan doonaan ugu yaraan hal hindise CXO ku saleysan AI sannadka 2018 iyo 75% waxay leeyihiin hirgelinta teknolojiyadda AI waxay saamayn togan ku yeelatay ururkooda. Ganacsiyada ayaa durba adeegsanaya barashada mashiinka iyaga oo qayb ka ah hawl-maalmeedkooda waxayna raadinayaan inay si weyn u adeegsadaan farsamadan dhawrka sano ee soo socda. The New York Times ayaa dhowaan socodsiisay sheeko ku saabsan sida Unilever u adeegsaday algorithm ay soo saartay Accenture si loogu kordhiyo sicirka beddelaadda degelkeeda 20%.
Sarkaalka sare ee farshaxanka Nuance Kevin O 'Brien wuxuu rumeysan yahay inaysan jirin "wax su'aal ah" in AI ay beddeli doonto suuqgeynta: "Mar dambe maahan wax sidan oo kale ah oo qarsoodi ah halka ay tahay kumbuyuutar kula hadlaya ama isku dayaya inuu wax iibiyo," ayuu yidhi. "Hadda waxay ku saabsan tahay sida aan u bilowno wanaajinta khibradda macmiilka iyo bixinta is -dhexgalka dhabta ah ee shaqsiyeed."
Unilever wuxuu adeegsadaa algorithm ay soo saartay Accenture si kor loogu qaado qiimaha beddelaadda boggeeda internetka 20%.
AI si baaxad leh ayaa loo adeegsadaa dhowrka sano ee soo socda, maaddaama meheraduhu ay u muuqdaan inay adeegsadaan tiknolojiyadda xitaa si ballaaran. Unilever, tusaale ahaan, wuxuu adeegsanayay AI dhowr sano kahor wuxuuna sheegay in qeybtooda ganacsi ee sameysa alaabada daryeelka shaqsiyeed ee Dove ay horumar wanaagsan ka sameysay aragtiyo otomaatig ah oo laga helay xog weyn sanadkii la soo dhaafay iyadoo la dhimayo kharashaadka.
Maanta, Sirdoonka Artificial (AI) ayaa inta badan loo adeegsadaa geeddi-socodka go'aan-qaadashada meheradda marka loo fiiriyo. Ganacsatadu hadda waxay falanqayn karaan xog aad u tiro badan oo ku qaadan lahayd sannado badan inay ka baaraandegaan mar hore oo ay gaaraan go'aanno xog -ogaal ah oo ku saleysan falanqaynta saadaasha ee ay soo saareen algorithms -ka AI. Tani, iyo waxyaabo kale, waxay u oggolaatay ganacsiyada inay ka faa'iidaystaan ​​Xogta Weyn
Sidee Sirdoonka Artificial -ku uu go'aammada ganacsiga uga gaadhayaa ganacsiga maanta?
Algorithm -ka AI wuxuu hoosta ka xariiqayaa kartida meheraddu u leedahay inay isticmaasho xog weyn oo ay ka soo saarto qiimaha. Waxaa jira horumar badan oo laga sameeyay beryahan AI, iyada oo farsamooyin wax barasho oo qoto dheer awood u leh inay soo saaraan natiijooyin heer-sare ah dalabyo badan oo ay ka mid yihiin aqoonsiga sawirka iyo hadalka, farsamaynta luqadda dabiiciga ah, barashada xoojinta, iyo kuwo kale.
Markay ganacsiyadu u sii socdaan Isbadal digital ah oo ay qaataan tignoolajiyada sida daruur Kombuyuutarada iyo garaadka macmalka ah, waxay mari doonaan isbaddallo halis ah oo iyaga siin doona faa'iidooyin maaliyadeed oo togan iyaga oo hela wax -ku -oolnimada hab -socodkooda. Si ay u sii ahaadaan ganacsiyada tartanka waa inay naftooda u abuuraan fursado cusub; tan waxaa lagu gaari karaa go'aan qaadasho ku saleysan xog. Hubi RemoteDBA.com.
Maqaalkani wuxuu muujinayaa sida sirdoonka macmalku muhiim ugu yahay ganacsiga maanta. Waxaa jira aalado badan oo il furan iyo barnaamijyo luuqadeed oo loo adeegsan karo si loogu hirgeliyo algorithms-ka AI qaabka ganacsigaaga.
Sidee loo hirgeliyaa AI meheradda? Faa'iidada ah in lagu daro barashada mashiinka iyo AI qaybta maaliyadeed ayaa ah inay caawiyaan otomaatiga, abaabulaan, toosiyaan, iyo falanqeeyaan xogta muhiimka ah. Tani waxay u oggolaaneysaa ganacsiyadu inay si wanaagsan uga faa'iideystaan ​​waqtigooda iyagoo si fiican u fahmaya qaababka hab -dhaqanka macmiilka oo ay ku daraan qiime.
Saamaynta AI ku leedahay meheradaha iyo sida ay maanta u shaqayso
Sirdoonka macmalku wuxuu noqday qayb weyn oo ka mid ah istaraatijiyadda ganacsiga adduunka oo dhan. Shirkadaha guuleysta waxay had iyo jeer raadinayaan habab ay ku kordhiyaan karti -xirfadeedkooda, u hagaajiyaan waayo -aragnimada macmiilka, una yareeyaan kharashaadka ganacsi. Laba ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ay la kulmaan marka ay kobcinayaan ganacsigooda iyo hagaajinta hababkaan waxay ku xeeran yihiin xogta iyo helidda siyaabo ay uga faa'iideystaan ​​xogta weyn.
Mustaqbalka codsiyada sirdoonka macmalka ah sidoo kale waa la fiirinayaa, iyadoo khubarada qaar ay rumeysan yihiin in meel walba loo adeegsan doono dhowrka sano ee soo socda halka qaar kalena ay rumeysan yihiin inay xaddidnaan doonto sababo jira awgood .
Mustaqbalka Sirdoonka Artificial ee Goobta Shaqada
Sirdoonka macmalka ah (AI) ayaa ganacsiyada ka beddelaya ku dhawaad ​​warshado kasta. AI waxay leedahay door sii kordhaysa goobta shaqada:
Warshadaha baabuurta ayaa adeegsada AI si ay u saadaaliyaan marka qayb ay u baahan doonto dayactir ka hor inta aysan ku guuldaraysan oo aysan xakamayn baabuurta iswada;
Shirkadaha daryeelka caafimaadku waxay adeegsadaan AI si ay u raadiyaan qaababka xogta bukaanka oo tilmaami kara calaamadaha cudurka sida wadno -qabadka iyo istaroogga; iyo
Dukaanleydu waxay u adeegsadaan AI si ay u wanaajiyaan geeddi -socodka ganacsiga, u kordhiyaan dakhliga iyagoo bartilmaameedsanaya dadaallada suuqgeynta, baahida saadaasha ee ku saleysan isbeddellada iibkii hore, iyo aqoonsiga khiyaanada/daacad -darrada.
Waa maxay sababta ganacsiyaduhu uga fikirayaan inay adeegsadaan Sirdoonka Artificial ee go'aan qaadashada?
In kasta oo meheradaha waaweyni ay yihiin diiradda koowaad ee AI, sidoo kale waxaa jira faa'iidooyin badan oo loo adeegsado ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ahba. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Khibrad macmiil oo la hagaajiyay;
Hagaajinta habka ganacsiga; iyo
Hoos u dhigista kharashaadka hawlgalka, kuwaas oo dhammaantood awood u siinaya in ganacsigu ka helo faa’ido tartan oo ka sarreeya asaaggiisa.
Maxay ganacsiyadu u baahan yihiin inay ka ogaadaan adeegsiga sirdoonka macmalka ah-Tallaabooyinka muhiimka u ah go'aan-qaatayaasha
AI waxaa loo adeegsan karaa meheradda si loo gaaro go'aanno loona qaado tallaabooyin aadanuhu u maleynaynin inay sameeyaan, laakiin keligeed ma fakari karto. Waa in had iyo jeer loo adeegsadaa aalad ama adeege u ah go'aan-qaadaha, oo aan loo beddelin iyaga. In kasta oo qaar ka mid ah shaqooyinka ka jira warshadaha qaarkood durba si otomaatig ah loogu adeegsado AI, haddana waxaa jira adeegsiyo kale oo badan oo loo adeegsado farsamadan. Qoraagu wuxuu ku doodayaa in adeegsiga barashada mashiinka ay tahay in si aad ah loo fiiriyo madaxda fulisa oo doonaya in shirkadoodu ay macaash ka hesho AI. Barashada mashiinka ayaa aad ugu guulaysatay inay ka caawiso shirkadaha macdanta xogta macmiilka si ay u fahmaan badeecadaha ay soo saaraan ama sida ay u hagaajin karaan qaabkooda ganacsi. Microsoft, tusaale ahaan, waxay adeegsataa sirdoon macmal ah si ay gacan uga geysato ka -hortagga is -dilka dadka adeegsada. Waxay mari karaan dhowr hab oo kala duwan ee isgaarsiinta waxayna ka qaadan karaan calaamadaha digniinta ee is-waxyeellada ama is-dilka.
Ganacsiyadu waxay horeyba u isticmaalayaan AI falanqaynta saadaalinta iyo sii deynta alaabta, iyo sidoo kale cilmi baaris. Waxaa suurtogal ah in sanadka 2020 uu jiro kombuyuutar leh caqli-galnimo; mid aqoonsan kara dareenka qoraalka, sawirada, muuqaalka, iyo waxa ku jira maqalka. Tani waxay horseedi kartaa in emailkaaga loo akhriyo sida buug oo kale iyo in akhrisku saameyn ku yeesho codka jawaabta aad ka hesho shirkadda aad u qortay.
5 Faa'iidooyinka AI ee Horumarinta Bangiyada
Dec 1 | Sirdoonka Artificial, Banking, Bangiga & Maaliyadda, Badalka Digital
7 Hababka Barashada Qoto -dheer Qof kasta oo Aad u Xamaasad leh waa inuu Ogaadaa
Oct 4 | Sirdoonka Artificial, Waxbarashada qoto dheer